အမိမြေသို့ကျေးဇူးဆပ်ခြင်း: အမှန်တရားရဲ့သမိုင်းမှာ..ဗိုလ်ချုပ်ရဲ့စစ်တပ် အရောင်မမှိုင်းစေချင်
စစ်အတွင်း..ကာလ နာဇီစစ်သုံ့ ပန်း..
Anne Frank ရဲ့ နေ့ စဉ်မှတ်တမ်း..
အပြစ်မဲ့ ကလေးမလေးရဲ့.သုန်းသွားခဲ့တဲ့ အပြုံး
လူသားတွေ အတွက်.. သာဓက..
တင်ပြခဲ့သော ကလေးတယောက်ရဲ့ ဘ၀
စစ်အာဏာရှင်တဦး၏ ရူးမိုက်မှုလေးတခု ပေါ့
ဂျုးဖြစ်တာနဲ့အသက်သေထိုက်ပါသလား..
တန်ဆာခံက..သေကြေရသော ဂျူးလူမျိုး ၆ သန်း
၂၅ ရာနှုန်းက ၁၅နှစ်အောက် ကလေးတွေ..
တကဲ့ ဖြစ်ရပ်မှန်..လူမဆန်တဲ့ ရက်စက်မှု.
သွေးရဲ့သက်သေ..လူသားတို့ ရဲ့ မျက်ရည်..
မုဒိန်းကျင့်ခံ နေရသော.မိန်းမဦးရေ များစွာ
မြေကြီးထဲက မိုင်းရှာ စတေးခံလူသား
သင်ရဲ့ သမိုင်းကောင်းပါရဲ့လား မောင်စစ်သားရယ်..
သင်နေထိုင်ရာသည်..ဗုဒ္ဓဘာသာနဲ့မြန်မာပြည်..
ဘိုးဘွားပေးခဲ့တဲ့ ဒို့ အမွေ
စစ်အာဏာရှင်တဦးရဲ့ နှုတ်မိန့် ..
နောင်တနေ့ နေ့ ..စစ်ပြေးဒုက္ခသည်ကလေးတွေ
သင်တို့ ရဲ့ နှလုံးသားအမြင်ကို.ကမ္ဘာသိကြပါလိမ့်မယ်..
အာဏာရှင်က စစ်တပ်အမည်ကိုပါ သတ်ပြန်ပေါ့
ဒါ အောင်ဆန်းရဲ့ စစ်တပ်မဟုတ်ဘူး..
ကရင် ကရင်နီ မွန်ကယား..
ကချင် ရခိုင် ရှမ်း နာဂ
၀ ပလောင် ချင်း စသောတိုင်းရင်းသား..
အစည်းပြေ သွေးကွဲမသွားပါနဲ့ ..
မြန်မာက တိုင်းရင်းသားကို မသတ်..
အာဏာရှင်ကို ဖြုတ်ချဖို့ 
ထင်းစည်းတို့ ရဲ့အား..ပျားတစ်အုံရဲ့ စွမ်းအား..
သင်သည်..ညီညွတ်ခြင်းရဲ့ အင်အား ပြကြပါစို့ .
Posted by Ma Thadar ( မသဒ္ဓါ ) at 9:52 PM
အဖေ့ သို့ လွမ်းစာ